Ozi Ọma Mak Dere 3:1-35
Jizọs gwọrọ nwoke aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ (1-6)
Ìgwè mmadụ buru ibu bịara n’ikpere mmiri (7-12)
Ndịozi iri na abụọ Jizọs (13-19)
Ikwulu mmụọ nsọ (20-30)
Nne Jizọs na ụmụnne ya ndị nwoke (31-35)
3 Ọ banyere ọzọ n’ụlọ nzukọ. Otu nwoke otu aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ nọkwa n’ebe ahụ.+ 2 N’ihi ya, ha nọ na-ele ya anya ka ha hụ ma ọ̀ ga-agwọ nwoke ahụ n’Ụbọchị Izu Ike, ka ha bo ya ebubo. 3 O wee gwa nwoke ahụ aka ya kpọnwụrụ akpọnwụ, sị: “Bilie bịa n’etiti.” 4 Ọ sịziri ha: “Iwu ò kwuru ka a na-eme ihe ọma n’Ụbọchị Izu Ike ka ọ̀ bụ ihe ọjọọ, ịzọ ndụ* ka ọ̀ bụ ibibi ndụ?”+ Ma ha gbachiri nkịtị. 5 Mgbe o lechara ha anya n’iwe, o wutere ya nke ukwuu na obi kpọrọ ha nkụ.+ Ọ sịziri nwoke ahụ: “Gbatịa aka gị.” O wee gbatịa ya, aka ya adị mma. 6 Ndị Farisii wee pụọ n’èzí, ha na ndị òtù Herọd+ amalite ịgba izu ozugbo ka ha gbuo ya. 7 Ma Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya gawara n’oké osimiri. Ìgwè mmadụ buru ibu ndị si Galili na Judia sokwaara ya.+ 8 Ìgwè mmadụ buru ibu sidị Jeruselem na Idumia nakwa n’ofe Osimiri Jọdan na gburugburu Taya na Saịdọn bịakwute ya mgbe ha nụrụ banyere ọtụtụ ihe ọ na-eme. 9 O wee gwa ndị na-eso ụzọ ya ka ha kwadebere ya otu obere ụgbọ mmiri ọ ga-anọ na ya ka ìgwè mmadụ ahụ ghara ịkpagide ya. 10 Ebe ọ bụ na ọ gwọrọ ọtụtụ ndị, ndị niile nwere ajọ ọrịa dị iche iche nọ na-agbakọta n’ebe ọ nọ ka ha bitụ ya aka.+ 11 Mgbe ọ bụla ndị mmụọ ọjọọ*+ ji hụrụ ya, ha na-adadị n’ala n’ihu ya, tie mkpu, sị: “Ị bụ Ọkpara Chineke.”+ 12 Ma ọ gwasiri ha ike ugboro ugboro ka ha ghara ime ka a mata onye ọ bụ.+ 13 O wee rịgoro n’otu ugwu ma kpọọ ndị ọ chọrọ,+ ha wee gakwuru ya.+ 14 O wee họpụta mmadụ iri na abụọ, ndị ọ kpọkwara ndịozi. Ha ga na-eso ya. Ọ ga-ezipụ ha ka ha na-ekwusa ozi ọma, 15 ọ ga-enyekwa ha ikike ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ.+ 16 Mmadụ iri na abụọ ahụ+ ọ họpụtara bụ Saịmọn, onye ọ gụkwara Pita,+ 17 Jems nwa Zebedi na Jọn nwanne Jems (ọ gụkwara ha Boanajis, nke pụtara “Ụmụ Égbè Eluigwe”),+ 18 Andru, Filip, Batolomiu, Matiu, Tọmọs, Jems nwa Alfiọs, Tadiọs, Saịmọn, onye na-anụ ọkụ n’obi, 19 na Judas Iskarịọt, onye mechara rara ya nye. O wee banye n’otu ụlọ. 20 Ìgwè mmadụ gbakọkwara ọzọ, nke mere na Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya enweghịdị ike iri nri. 21 Ma mgbe ndị ikwu ya nụrụ ihe na-emenụ, ha gawara ka ha jide ya, n’ihi na ha nọ na-ekwu, sị: “Isi emebiela ya.”+ 22 Ndị odeakwụkwọ ndị si Jeruselem bịa nọkwa na-asị: “Bielzebọb* nọ n’ime ya, o jikwa ike onye na-achị ndị mmụọ ọjọọ achụpụ ndị mmụọ ọjọọ.”+ 23 N’ihi ya, ọ kpọrọ ha ka ha bịakwute ya, ya emeere ha ihe atụ, sị: “Olee otú Setan ga-esi achụpụ Setan? 24 Ọ bụrụ na alaeze ekewaa na-emegide onwe ya, alaeze ahụ ga-ada.+ 25 Ọ bụrụ na ezinụlọ ekewaa na-emegide onwe ya, ezinụlọ ahụ ga-ada. 26 Ọ bụrụkwa na Setan ebilie na-emegide onwe ya ma kewaa, ọ gaghị eguzo, kama nke ya agwụla. 27 N’eziokwu, e nweghị onye banyere n’ụlọ nwoke dị ike nke ga-enwe ike izuru ihe ya ma ọ bụrụ na o bughị ụzọ kee nwoke ahụ dị ike agbụ. Ọ bụ naanị mgbe ahụ ka ọ ga-enwe ike izuru ihe ndị dị n’ụlọ ya. 28 N’eziokwu, ana m asị unu na a ga-agbaghara ụmụ mmadụ ihe niile, n’agbanyeghị mmehie ha mere na nkwulu ha kwuluru. 29 Ma, onye ọ bụla nke kwuluru mmụọ nsọ, a gaghị agbaghara ya ruo mgbe ebighị ebi,+ kama ikpe mmehie amala ya ruo mgbe ebighị ebi.”+ 30 O kwuru ihe a n’ihi na ha nọ na-asị: “Mmụọ ọjọọ* ji ya.”+ 31 Nne ya na ụmụnne ya ndị nwoke+ wee bịa. Ha guzo n’èzí ma dunye mmadụ ka ọ gaa kpọọ ya.+ 32 Ebe ọ bụ na ìgwè mmadụ nọ ọdụ gbaa ya gburugburu, ha sịrị ya: “Lee, nne gị na ụmụnne gị ndị nwoke nọ n’èzí na-achọ gị.”+ 33 Ma ọ zara ha, sị: “Ole ndị bụ nne m na ụmụnne m ndị nwoke?” 34 O wee lee ndị nọ ya gburugburu anya, sị: “Lee, ndị a bụ nne m na ụmụnne m ndị nwoke.+ 35 Ọ bụ onye ọ bụla nke na-eme uche Chineke bụ nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na nne m.”+
^ Bielzebọb bụ aha a na-akpọ Setan.